Publié mai 22, 2019 par Book News
Miisa telo ireo laharana maintso ahafahan’ny olompirenena miantso raha toa ka mahita tranga tsy fanarahan-dalàna.
« Nametraka laharana maintso telo (3) ahafahan’ny olompirenena miantso raha toa ka mahita tranga tsy fanarahan-dalàna amin’izao mialohan’ny fifidianana izao, mandritra ny fampielezan-kevitra ny Safidy . Azon’ny olompirenena atao ny miantso ny laharana 0323203232sy ny 0336502333 ary ny 0343081020raha mahita tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo kandidà sy ireo olona miasa amin’ny fifidianana toa ny HCC sy ny CENI »
hoy ny tompon’andraikitra ao amin’ny Fandio na ny Fifidianana ANtoka ho an’ny Daholobe, Ifantenana Olombanona, Rakotondrabe Harnelle.
Tsy andoavam-bola ny fiantsoana amin’ireo laharana maintso. Raha mahita ahiahy dia azo atao miantso amin’io laharana io. Vao nisokatra ity fifidianana Solombavambahoaka ity dia efa misy ireo laharana maintso ireo. Mandray antso izy ireo mandritran’ny fampielezan-kevitra, ny fifidianana, aorian’ny fifidianana. Izany hoe, mialohan’ny famoahana ireo vokatra ofisialy sy ny fifidianana Solombavambahoaka.
Rakotondrabe Harnelle, tompon’andraikitra ao amin’ny Fandio. cc : Toria Dimbiniaina
Rehefa voaray ireo vaovao avy amin’ny olompirenena dia mijery ny fahamarinany na ny « recoupement » ny Safidy. Mety manoro an’ireo olona miantso ny laharana hafa tokony antsoina na toerana hafa tokony halehany izay zavatra mitranga hitany mandritra ny fifidianana ihany koa ity Ivotoerana ity.
Marihina fa efa hatramin’ny fifidianana Filoham-pirenena no misy ny laharana maintso ary miverina misokatra indray amin’izao. Tsiahivina fa maherin’ny 100 ny antso voarain’ny Safidy nandritra ny fifidianana Filoham-pirenena farany teo.